Waxa alaha u naxariistee dhintay Axmed Yuussuf madixii daladii macaaradka Djibouti - Horn Future
Waxa alaha u naxariistee dhintay Axmed Yuussuf madixii daladii macaaradka Djibouti
Paris (Horn Future)-Waxa maanta alaha u naxariistee ku dhintay dalka Fransiiska Axmed Yuussuf Xumed oo ahaa madixii daladii burburtay ee USN ee ay ku bahoobeen ururo kamid ah xisbiyada macaarada Djibouti.
Marxuum Axmad oo milayyadan u jiifay xanuun haleelay ayaa waxa uu kamid ahaa xubinihii asaasay ururka macaaradka ee ARD ee uu madaxa ka ahaa hogaamiyihii dhintay alaha u naxariistee Axmad Diini Axmad.
Axmed Yuussuf Xumed ayaa waxa uu ahaa mid kamid ah siyaasiyiinta waa wayn ee ee aragtitda fog ee dalka Djibouti,waxana uu ixtiraam weyn ku dhex lahaa bulshada dalka.
Dadka aqoonta u lahaa ayaa waxay ku tilmaameen inuu shakhsi ka talin jiray samaha iyo wanaaga intii uu ku guda jiray noloshiisa siyaasadeed iyo xilliyadii adkaa ee halganka dalada USN ay kula jirta kaligii-taliye ka hor intii aynan burburin.
Marxuumkan ayaa waxa dhaawacyo u gaystay sanadihii u dambeeyay ee uu madaxa ka ahaa dalada USN ka hor intii aynan burburin ciidamada daacada u ah qoyska kaligii-taliye Geelle kadib markii ay ku weerareen goob ay ku kulmayeen iyada oo garaacis ay u gaysteen ay sababtay inay lug ka jabiyaan.
Waxa marxuumkan uu ku dhashay magaaladda cad ee Tajoorah sanadku markuu ahaa 1938,waxana hogaanka daladii USN ee ay ku bahoobeen ururada macaaradka Djibouti si aqlabiyad ah loogu doortay 18-kii September, 2004-kii.
Marxuumkan ayaa waxay saaxiibo aad u dhow ahaayeen madixii hore ee xisbiga ARD Axmed Dini Axmed,waxana xidhiidhka u dhexeeyay labadan hogaamiye uu ahaa mid gun-dheer oo lagu tilmaamo saaxiib nololeed,iyagoo saaxiib ku ahaa muddo dheer halganka ay kaga soo horjeedaan kaligii-taliye iyo qoyskiisa oo dalka Djibouti u rogay hanti ay dhaxal u heleen.
Waxa marxuumka dadka aqoonta u leh ay ku sheegeen inuu ahaa shakhsi aqoon u leh diinta,ahaana qof alaah ka cabsi leh oo cibaado wanaagsan,waxana eebe aan uga baryaynaa inuu geeyo janooyinkiisa, Innaa lilaah Wa inna Ilayhi Raajicuun.
« MiddleEastMonitor:Imaaraadka Carabta iyo Isra’iil xidhiidhkooga oo si degdeg ah u koraya	» Erdogan urges Muslim countries to help Rohingya